Engineering makosi muUkraine - Ukrainian Munopinda Center
Civil, Construction kana Architecture Engineering
Masters dhigiri Duration: 2 makore(Muripo Kopar 3500USD / gore, uye zvakasiyanasiyana nemari 1st Yr chete pekugara: 2150USD)
(akatumira Ukraine Embassies nekombiyuta pane vadzidzi’ nzvimbo kuburikidza Bazi Affairs Foreign. Tinopa kopi kuti Visa Support / Rusimbiso vadzidzi pamwe.) 100$US
Hostel muripo (Yatainge tabva kugadziridza uye tsime yakarongedzwa dzimba, vanhu vaviri mune rimwe kamuri) 300$US pa dzingaparwe gore
Muripo muripo kubva 2nd gore rokupedzisira gore 2600$US pagore kusanganisira pokugara.
muripo Fee 2700$US
Hostel muripo (Yatainge tabva kugadziridza uye tsime yakarongedzwa dzimba, vanhu vaviri mune rimwe kamuri) 600$US pa dzingaparwe gore
Consultancy mhosva kwedu kwakasimba 900$US
Muripo muripo kubva 2nd gore rokupedzisira gore 3000$US pagore kusanganisira pokugara.
Masters dhigiri Duration: 2 makore(muripo muripo 2600USD / gore, uye zvakasiyanasiyana nemari 1st Yr chete pekugara: 750USD)
* Invitation mari 250$US
Hostel muripo (Dai siyana vamwe Africa) 600$US kwegore rimwe
Muripo muripo kubva 2nd gore rokupedzisira gore 3000$US pagore kusanganisira pokugara
Hostel muripo (zvingava siyana kuti kumayunivhesiti akasiyana, anofanira reconfirm) 500$US pa dzingaparwe gore
Muripo muripo kubva 2nd kusvikira kwokupedzisira gore pamwe pokugara 3000$US pagore
Computer Science / Computer Engineering / Computer Systems uye Networks / Information Technology / Software Engineering / Telecommunication / Misa Communication, zvokuimba Engineering, Electrical / Electronics Engineering, Civil / Architecture Engineering, Automobile Engineering, Mafuta Gas / Petroleum Engineering
Masters dhigiri Duration: 2 makore(muripo muripo 2600EUR / gore, uye zvakasiyanasiyana nemari 1st Yr chete pekugara: 2150USD)
(akatumira Ukraine Embassies panguva mudzidzi nzvimbo kuburikidza Ushumiri Affairs Foreign. Tinopa kopi kuti mudzidzi uyewo) 50$US
zvokuimba Engineering (BSc. & MSc.)
Masters dhigiri Duration: 2 makore (muripo muripo 2600EUR / gore, uye zvakasiyanasiyana nemari 1st gore chete pekugara: 2150USD)
muripo Fee 2650$US
* Invitation mari 300$US
Hostel muripo (Dai siyana vamwe Africa) 500$US kwegore rimwe
Muripo muripo kubva 2nd gore rokupedzisira gore 3200$US pagore kusanganisira pokugara
Computer Systems uye Networks (BSc & MSc.)
Masters dhigiri Duration: 2 makore (muripo muripo 2600EUR / gore, uye zvakasiyanasiyana nemari 1st Yr chete pekugara: 2150USD)
Hostel muripo (zvingava siyana kuti kumayunivhesiti akasiyana, anofanira reconfirm) 600$US pa a6ademic gore
Total Package pamusoro
Muripo muripo kubva 2nd gore rokupedzisira gore 2800$US pagore kusanganisira pokugara
Mafuta Gas / Petroleum Engineering
Hostel muripo (Yatainge tabva kugadziridza uye tsime yakarongedzwa dzimba, vanhu vaviri mune rimwe kamuri) 500$US pa dzingaparwe gore
Computer Science / Computer Engineering / Computer Systems uye Networks / Information Technology / Software Engineering
Masters dhigiri Duration: 2 makore(Muripo Kopar 2600USD / gore, uye zvakasiyanasiyana nemari 1st Yr chete pekugara: 700USD)
CISCO nokudzidziswa (chitupa chirongwa)
CISCO nokudzidziswa hwakapiwa Ukraine zvinozivikanwa munyika yose uye mudzidzi Anopiwa “Pose musoro Certificates” pamusoro pokupedza zvirongwa mumwe kana vose.
Language kurairirwa: The CISCO Kudzidziswa inowanika chero mutauro
Course kutanga musi: Chero nguva kumativi gore
Minimum chinodiwa: Chero kombiyuta dhipuroma, kana tsvimborume kana vanatenzi dhigirii chero zvikuru.
Duration kupedza CISCO: 2 makore. Asi kana mudzidzi aita CISCO nokudzidziswa kare, iye / iye anogona kutanga inotevera dariro nokudzidziswa. Minimum nguva yokupinda payunivhesiti CISCO dzidzo: 6 months
Kurovedza One gore pasuru: 3500USD zvinosanganisira Invitation tsamba + Courier mhosva + Bank Trasaction mhosva (425SD), Visa Support, muripo muripo, Accommodation pa University hostel, Health Insurance, Immigration Insurance, Kunyoresa pana Immigration Department, Zvakakodzera Documentation kubvisa Airport Immigration, Air chiteshi pamotokari, Transport kuyunivhesiti, Consultancy uye basa redu nezvaifanira.
6 mwedzi nokudzidziswa nhuri: 3000USD zvinosanganisira Invitation tsamba + Courier mhosva + Bank Trasaction mhosva (425SD), Visa Support, muripo muripo, Accommodation pa University hostel, Health Insurance, Immigration Insurance, Kunyoresa pana Immigration Department, Zvakakodzera Documentation kubvisa Airport Immigration, Air chiteshi pamotokari, Transport kuyunivhesiti, Consultancy uye basa redu nezvaifanira.
Invitation tsamba + Courier mhosva + Bank Trasaction mhosva (425SD) ndiye chete muripo uitwe kubva munyika mudzidzi, Mamwe muripo ari kunyorerwa pamusoro Patakasvika.
Vadzidzi vari kumusoro 25years pazera, Kukokwa tsamba + Courier mhosva + Bank Trasaction mhosva (525SD)
Hunokosha Note: Standard, Zambian, Zimbabwean, Botswana, Sikwazirendi, Resoto, Mozambique uye zvokuMalawi National vadzidzi, zvimwe zvizvarwa vanogara munyika dzinotaurwa munyika uye akapedza chikoro kwavo.
Indian vamhan'ari kuwana isina mutengo kukokwa tsamba uyewo kudzidza muUkraine chero yunivhesiti.
Vadzidzi kubhadhara chete rekutakura mhosva kubhadhara kutumira kukoka tsamba yavo dhl kuti Delivery i.e. 100USD
* Kukokwa tsamba uye rekutakura mhosva zviri kunyorerwa kuburikidza Bank Kutamisirwa. Bank mhosva / basa achiti uchatamisa akakumbira mari vari kuti inobhadharwa mudzidzi.
Available vanopupurirwa Chirongwa,
iT zvinokosha: PC Hardware uye Software:
The IT Essentials: PC Hardware uye Software hweutungamiri chinopa sumo kombiyuta Hardware uye Software unyanzvi zvinodiwa kubatsira kusangana kukura kudiwa kupinda-pamwero ruzivo uye yekufambisa (ICT) nyanzvi. Kosi yacho anofukidza kunyatsogona PC zvigadzirwa, network, nokuchengeteka, uye rinewo mhinzo yemhando pfungwa.
Vadzidzi vakanga apedze kosi ino vachakwanisa kutsanangura revadzidzi zvakamisa hurongwa kombiyuta, kokerai kombiyuta hurongwa, yokugadza uchishandisa hurongwa, uye disposal kushandisa maitiro maturusi uye chirwere Software. Hands-pamusoro Labs uye Virtual Laptop uye Virtual zvishandiso Desktop kudzidza kubatsira vadzidzi kuva nemafungiro dzinonetsa uye kunzwisisa matambudziko unyanzvi. Cisco Packet Tracer simulation anotsanangura mabasa pakudzidza kusimudzira ubanguranyika samambure nekubatsirana nokuchengeteka pfungwa uye kubvumira vadzidzi vaedze samambure maitiro.
iT zvinokosha: PC Hardware uye Software ane maoko-mberi, basa vaifarira e-kudzidza mhinduro ane kusimbiswa hunobatsira ruzivo kubatsira vadzidzi kuva dzinokosha unyanzvi kombiyuta, pamwe zvinokosha basa unyanzvi. Kosi yacho rinobatsira vadzidzi kugadzirira kupinda-pamwero ICT basa nemikana uye CompTIA A + advertising, izvo zvinobatsira vadzidzi kusiyanisa pachavo pamusika mberi nemabasa avo. Pamusoro pe, Muswere inopa pakudzidza gwara kuna CCNA Kuwanika uye CCNA ubanguranyika curricula.
The Cisco CCNA ubanguranyika hweutungamiri chinopa Integrated uye nzwisisika mishumo network nyaya, kubva kunyatsogona kune yemhando mafomu uye mabasa, apo kupa mukana maoko-pamusoro hunobatsira ruzivo uye munyoro unyanzvi budiriro. Kosi yacho rinodzidzisa Networking kwakavakirwa zvemichina, akafukidza Networking pfungwa vachishandisa kumusoro-pasi, yokungotaura, uye Integrated kusvika - kubva pomumbure chikumbira pomumbure protocols nerubatsiro akapa kuna mafomu avo kubudikidza dzakaderera akaturikidzana ari samambure.
CCNA ubanguranyika rakagadzirirwa vadzidzi yemhando zvinetso uye unyanzvi Analytical. Kosi yacho inopa misoro uye yokungotaura kudzidza chiitiko Analytical vadzidzi, uye anoshandisa mutauro kuti aligns zvakanaka mapurani pfungwa. Dyidzana mabasa midzi zvaidzidziswa, pamwe hwakadzama, yokungotaura gutsikana. Advanced Labs kuvaka mafungiro dzinonetsa uye dambudziko nekugadzirisa unyanzvi uye kukurudzira ubanguranyika uye tsvakurudzo.
CCNA ubanguranyika anogona kudzikinurwa sezvo yakazvimirira zvidzidzo kana revatema kuva achizoshandawo kosi yokudzidza, akadai dhigirii zvirongwa mukati IT, ouinjiniya, masvomhu, kana sayenzi. Nepo anonyanya akagadzirirwa postsecondary masangano, CCNA ubanguranyika yakakodzera vadzidzi vazhinji dzidzo mumatunhu kana vane zvaida unyanzvi, uye kana Instructional nzira anotsigira pakudzidza kwavo nomutobvu zvinangwa zvedzidzo.
CCNA ubanguranyika kunobatsira kugadzirira vadzidzi kuti kupinda-chechetere basa mikana, mberi dzidzo, uye munyika yose-vakaziva Cisco CCNA advertising.
CCNP (CISCO vanopupurirwa Network Professional):
Cisco vanopupurirwa Network Professional (CCNP) validates mano kuronga, dzika, ongorora uye disposal omunharaunda uye rakapamhamha-nharaunda zvebhizimisi network uye vachishandirapamwe vane unyanzvi ari yemhando kuchengeteka, izwi, Wireless nemavhidhiyo zvinetso. The CCNP advertising yakakodzera vane gore kanenge mumwe networking ruzivo vanenge vakagadzirira mberi unyanzvi hwavo uye kushanda vakazvimiririra pane kunzwisisa samambure mhinduro. Vaya nekuzadzikisa CCNP vakaratidza unyanzvi hunodiwa zvebhizimisi mabasa akadai samambure mukoti, rutsigiro injiniya, hurongwa injiniya kana samambure injiniya.
The Cisco CNA Security hweutungamiri inopa danho rinotevera vanhu vanoda kuwedzera kwavo CCNA-pamwero unyanzvi yakatarwa uye kubatsira kusangana kukura kudiwa pamumbure kuchengeteka nenyanzvi. Kosi yacho inopa sumo kusvika pokupedzisira kuchengeteka pfungwa uye unyanzvi zvinodiwa kuti kugadzwa, troubleshooting, uye richiona samambure mano kuramba kuvimbika, zvakavanzika, uye Kuwanikwa mashoko uye mano. CCNA Security kunobatsira kugadzirira vadzidzi kuti kupinda-pamwero kuchengeteka basa nemikana uye kuzivikanwa munyika yose Cisco CCNA Security advertising.
kosi Uyu maoko-pasi, basa vaifarira e-kudzidza mhinduro ane kusimbiswa hunobatsira ruzivo kubatsira vadzidzi kuva swa kuchengeteka unyanzvi, pamwe nemafungiro yokutsoropodza uye kunzwisisa dambudziko nekugadzirisa unyanzvi. CCNA Security ane mwero hweutungamiri tiine nekudzidza paIndaneti uye mukirasi. Vadzidzi vari kunyoresa CCNA Security vanotarisirwa kuva CCNA-pamwero network pfungwa ruzivo uye unyanzvi, pamwe dzinokosha PC uye Internet wekushandisa unyanzvi.
Kunyange zvazvo pasina zvaida kosi prerequisites, vadzidzi vanokurudzirwa kupedza CCNA Kuwanika kana CCNA ubanguranyika curricula kuwana chikuru CCNA-pamwero hwokutiparadza uye nokuchinja unyanzvi zvinodiwa kuti ubudirire paboka iri. CCNA Security inopa danho rinotevera kuti CCNA Kuwanika kana CCNA ubanguranyika vadzidzi vanoda kuwedzera CCNA-pamwero unyanzvi kuisa kugadzirira basa samambure kuchengeteka.
The Cisco CCNA Kuwanika hweutungamiri rinopa talk network dzidziso, hunoshanda ruzivo, uye mikana nebasa ubanguranyika uye munyoro unyanzvi budiriro. Kosi yacho rinodzidzisa Networking kwakavakirwa kushanda, akafukidza Networking pfungwa mukati akapoteredza samambure runyararo vadzidzi ungasangana muupenyu hwavo hwezuva nezuva - kubva kuhofisi duku uye musha hofisi (Sohõ) Networking kuti zvakawanda zvakaoma zvebhizimisi uye yokungotaura network yokutevedzera pave paya zvaidzidziswa.
CCNA Kuwanika rakagadzirirwa vadzidzi dzinokosha PC unyanzvi uye hwaro pamasvomhu uye dambudziko nekugadzirisa unyanzvi. Kosi yacho inopa muenzaniso vave nechekuita kudzidza ruzivo zvakawanda yokuona uye kinetic vadzidzi. dyidzana mabasa vakawanda midzi yose mapoka kuti aputse rwezuva uye kubatsira kusimbisa kunzwisisa mudzidzi. Pamusoro pe, vazhinji Labs zvinokurudzira okuwedzera maoko-pamusoro tsika.
CCNA Kuwanika anogona kudzikinurwa sezvo yakazvimirira zvidzidzo kana revatema kuva achizoshandawo kosi yokudzidza, akadai zvemichina kana mberi zvirongwa dzidzo. Kosi yacho yakakodzera vadzidzi vazhinji dzidzo mumatunhu uye marudzi nemasangano, kusanganisira muzvikoro, zvikoro yechipiri, mumayunivhesiti, mumakoreji, basa uye michina zvikoro, venharaunda, uye nevamwe vasiri chinyakare runyararo kudzidza.
CCNA Kuwanika kunobatsira kugadzirira vadzidzi kuti kupinda-chechetere basa mikana, mberi dzidzo, uye munyika yose-vakaziva Cisco CCENT uye CCNA certifications.